ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းက erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် (2017) - Your Brain On Porn
porn ကိုကြည့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (2017) ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုဘယ်လို
နောက်ဆုံးရေးသားချိန် 21 ဇူလိုင်လ 2017
An အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေ့လာမှု erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုခံရသောသူ 40 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောယောက်ျား၏ရာခိုင်နှုန်း 15% နှင့် 2% အကြားကနေ 5% အထိ, နောက်ဆုံး 30 နှစ်အတွင်းတဟုန်ထိုးမြင့်တက်သွားသည်မူကြောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချုပ်ထဲမှာဖြစ်သင့်တဲ့သူအတော်များများကလူပျိုတို့စောင့်ကြည့်၏ရလဒ်အဖြစ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုခံစားနေရပြီးနေကြတယ် ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း အစောပိုင်းအသက်အရွယ်ကနေ။
နည်းပညာ၏လွယ်ကူခြင်းမှတဆင့်ညစ်ညမ်းဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာထိတွေ့မှု, မိတ်ဖက်တွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှိုးဆွခြင်းမရှိတော့ရှိရာအမှတ်, arousal ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အမိန့်တွင်ပိုမိုလွန်ကဲနှင့် "အသစ်အဆန်း" ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်လိုအားဖန်တီးပေးပါတယ်။
အပြုအမူသိပ္ပံအတွက်တဦးတည်းကိုနိုင်ငံတကာလေ့လာမှုတစ်ခုဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုခံရသောသူ 40 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောယောက်ျား၏ရာခိုင်နှုန်း% 15 မှ 2% နှင့် 5% အကြားကနေ, နောက်ဆုံး 30 နှစ်အတွင်းတဟုန်ထိုးမြင့်တက်သွားသည်ကပြောသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုကျယ်ပြန့် neuroscientific သုတေသနဆန်းစစ်သူကိုအမေရိကန် uroligists, အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အားဖြင့်ကောက်ယူခဲ့သည်။
ဒါဟာ porn နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် "စိတ်ပျက်စရာ" အဖြစ် Porn-သွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ် (PIED) နဲ့ခံစားနေရပြီးသူတို့ကိုအစစ်အမှန်လိင်မှတ်ပုံတင်ဘို့ကလည်း, တစ်ဦးစိုက်ထူထိန်းသိမ်းခြင်းကြီးမြတ်အခက်အခဲရှိပါတယ်။
Sheryl Rahm, အပြောင်းအလဲများ Rehab Center မှာစွဲအထူးကု, porn စွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများမှစွဲကိုထင်ဟပ်ကဆိုသည်။
"porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူ ... masturbate ဖို့တိုက်တွန်းစစ်မှန်တဲ့လိင်စိတ်မဖြစ် - သူတို့ porn စွဲနေကြသည်။ သူတို့ကတစ်ဦးပြင်ဆင်ချက်များနှင့်ယာယီမြင့်မားသောရှာကြံစွဲဖြစ်ကြသည်။
"Porn သင့်ရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သူတို့မှမှန်မှန် porn ကို အသုံးပြု. ခဲ့ကြပါလျှင်အရက်, ကင်းနှင့်အခြားခက်ခဲမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေ detoxing အဖြစ်, လှုံ့ဆော်မှု, စိတ်ကျရောဂါနှင့်အိပ်စက်မှုလျော့ကျနှင့်ပြည့်စုံအဖြစ် '' မြင့်သောရ '' ဆုတ်ခွာစေနိုင်ပါတယ်။ "
ကိပ်တောင်း-based, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ (Stop) ညွှန်ကြားရေးမှူး Clive လူ့ကိုဆီးတားဖို့အတူတကွပြောသည်ရပ် တနင်္ဂနွေကသက်သေခံ သူတို့ကုသခံခဲ့ရသည်သူတို့ "အငယ်နှင့်အငယ်လာပြီ" ခဲ့။
"ကျနော်တို့ကတန်းခုနစ် compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူအစောပိုင်းအထက်တန်းကျောင်းကလေးတွေရှိသည်။ ငါကျောင်းများမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမကိစ္စရပ်များနှင့်မေးခွန်းများကိုများအတွက်အမည်မသိ box ကိုအဲဒီမှာဖွင့်နှင့်အကြောင်းကျနော်တို့ကပြဿနာအများအပြားမှအကြောင်းကြားရမည်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်။ "
သူကရပ်တန့်တစ်ဦးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမဟာဗျူဟာအဖြစ်အဘယ်သူမျှမ porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသို့မဟုတ်လိင်အကြံပြုကဆိုသည်။
"သူတို့ကညစ်ညမ်းတဲ့အစားအစာပြီးနောက် erectile disfunction လေပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနည်းတူစိတ်လှုပ်ရှားစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာဦးနှောက် rewire ရန်, ခြောက်လတခါတရံခန့်သုံးလကြာနှင့်ထိခိုက်မှုပြုပြင်ကြရမည်ဘို့သို့သော်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့် willpower ကြာပါတယ်။ "
သူကကလေးငယျမြားသိချင်စိတ်ထဲက porn ကိုကြည့်ကာလအချိန်တွေအများကြီးကပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်အလွဲသုံးစားမှု, အထီးကျန်ဆန်ခြင်းနှင့်နိမ့် Self-လေးစားမှုကိုအခြားအချက်များဖြစ်ကြသည်။
"ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးဖုန်းများမှ [သားသမီးရဲ့] access ကိုကန့်သတ်ရန်မိဘများပြောပြသို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်အကြောင်းအရာလုပ်ကွက်သုံးပြီးဆိုလိုနိုင်ပါ။ "
လူ့ porn စွဲအကြောင်းကိုကလေးတွေဆုံးမဩဝါဒ ပေး. ကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သင့်တယ်ဟုပြောသည်။
UKZN, ဒေါက်တာ Lubna Nadvi မှာချိုးဖောက်မှုများများအတွက်အကြံဉာဏ် Desk ၏ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်, ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေဆီသို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်ဟုပြောသည်။
Nadvi အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်တဲ့လူတွေ, ယောက်ျားလေးများသတိပေးခဲ့သည်တစ်ခုပညာရေးကမ်ပိန်းဖြစ်ရှိလိုအပ်သောညစ်ညမ်းကျား-based အကြမ်းဖက်မှုများရှည်ကြောင်းအပြုအမူတွေကိုဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်ဟုပြောသည်။
ကျား, မများနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများကိုအထူးပြုသည့်တစ်သိန်းစီးတီးတက္ကသိုလ်သုတေသီ Lisa ကို Vetten, porn လုလင်တို့သည်အမျိုးသမီးများ၏လိင်လိုခငျြသောအရာကိုတစ်ဦး skewed အမြင်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
သူမသည်ဆက်ပြောသည်: "သူတို့ကအမှန်တကယ်အမြိုးသမီးမြားနှငျ့ဆကျဆံရာတှငျရှောင်ရှားရန် porn အသုံးပြုနေသည်ဆိုပါက, ထိုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကရငျးနှီးဖြစ်နိုင်စွမ်းကင်းမဲ့စေနိုင်သည်။ "
Kerushun ဗီပီလေး, သကျသခေံ